Fifaninanan-kira TF1 :: Tafita amin’ny famaranan’ ny «The Voice» i Marghe • AoRaha
Miakatra sy mivoatra hatrany. Isan’ireo mpifaninana efatra hiatrika ny famaranana amin’ ilay fifaninanan-kira ao amin’ny fahitalavitra Frantsay TF1, i Margherita Davico na i Marghe, andriambavilanitra mizaka zompirenena roa (Malagasy sy Italiana). “Mihoatra noho izay fahita nahazatra, mampitolagaga, mahatalanjona ny zavatra nataony teo. Nanomboka tamina zazavavy kely aho ary izao efa lasa andrarezin’ny feo sahady izy”, hoy i Florent Pagny nandritra ny seho tamin’ny sabotsy lasa teo, taorian’ny hira nentiny nifaninana teo amin’ny dingan’ny manasa-dalana. Ilay hiran’i Joe Cocker, “You are so beautiful”, no nambaboan’i Marghe an’ireo mpitsara efatra mianadahy (Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent ary Vianney) ka nampitsangana azy ireo nihoby an’ity kintan’ny kanto vaovao ity.
Tamin’ny fotoana nipetrahany teto Madagasikara dia efa niatrika fifaninanan-kira tamina fahitalavitra iray izy saingy nihintsana nialoha. Amin’izao fotoana izao, hitan’ireo mpanakanto matihanina any ivelany fa manana ny ho aviny mamiratra ity andriambavilanitra malagasy safiotra ity. Isan’ireo kandidà nahasarika olona maro izy, taorian’ireo efa niatrika an’ity fifaninanan-kira avo lenta ity.
Efa nampoizina ihany fa hahasarika ny mpijery sy ny mpitsara amin’ny feo mangany i Marghe, izay mahafehy ny feo ambany sy ambony ary manana teknika fihirana hafa mihitsy, miohatra amin’ireo nifanandrina taminy. Niakatra moramora ary nahatonga ny mpanaraka azy haneho fankasitrahana ity mpihira malagasy efa tao amin’ny tarika Tsakarao ity.
Isan’ny efa nandramany natao sy nentiny niomana amin’izao fiatrehana ny “The Voice” izao ny fihirana amin’ny fombany ny hiran’ireo mpanakanto toa an-dry Erick Manana (Mbola ho avy), Tsakarao (Tsy misy Roiroy) ary Monika Njava (Ravola).
Raha ny fahaiza-manaony dia betsaka kokoa ny herijikany hahazoany ny andiany fahafolo amin’ity fifaninanan-kiran’ny TF1, “The Voice”, ity. Miandrandra fatratra an’izany, rahateo, ireo nanohana azy fatratra sy ireo mpankafy manerana an’izao tontolo izao.
Hiaraka hifanintsana aminy ao amin’ny dingan’ny famaranana ry Jim Bauer ao anatin’ny ekipan’i Marc Lavoine, Mentissa Aziza ao amin’ny ekipan’i Vianney ary Cyprien miaraka amin’i Amel Bent. Amin’ny 15 mey no hotanterahina ny fifanintsanana famaranana.
Fanakorontanana sy fanimbana :: Olona dimy amby efapolo voasambotra tany Antsirabe
Fifaninanana Slam maneran-tany :: Tafita amin’ny manasa-dalana ny solontena malagasy